National Power News:: मोडल वाच National Power News:: मोडल वाच
माईतिमा जाउँ कसरी जाउँ भन्दै बजारमा आईन गायिका कविता थापा
काठमाण्डौ- नेपाली हिन्दू महिलाहरुको महान् पर्व तीज नजिकिएसँगै तीज सम्बन्धि गीतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसैक्रममा कवीता थापाको स्वर ,शब्द र संगीत रहेको तीज गीत माईतिमा जाउँ कसरी जाउँ.. सार्वजनिक भएको छ । बबीता श्रेष्ठको निर्देशनमा रहेको गीतको भिडियोमा अञ्जली अधिकारी, अर्जुन खरेल लगायतका कलाकारको नृत्य अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई राजेश कुमारले सम्पादन गरेका
बलिउड नायक आमिर खान गतबर्षको असफल चलचित्र ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’का कारण गम्भिर छन् । तिहारमा रिलिज भएको चलचित्र नचल्दा आमिरले लामै समय ब्रेक लिएर नयाँ चलचित्र घोषणा गरे । उनले घोषणा गरेको नयाँ चलचित्रको नाम, ‘लाल सिंह चड्डा’ हो । यो चलचित्रका लागि आमिरको गेटअप समेत बदलिएको छ । यो चलचित्रमा नायिका करिना कपुर पनि
चार अर्ब बढी लगानी किन गरियो ?
बाहुबली श्रृंखलाका दुई फिल्मको ऐतिहासिक सफलतापछि दक्षिण भारतीय स्टार प्रभासको हिन्दी भाषी दर्शकमाझ पनि राम्रो फ्यान फलोइङ छ । प्रभासको नामबाट उनी चिनिए पनि नचिनिए पनि बाहुबलीको नामले भने उनलाई बालबालिकादेखि वृद्ध-वृद्धासम्मले चिन्छन् । उनै प्रभासले अभिनय गरेको हिन्दी फिल्म साहो अगष्ट ३० का दिनदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । यो फिल्म हिन्दी, तमिल तथा तेलुगु भाषामा
‘तिमी सुनसँग जोखिने मान्छे’ गीत सार्वजनिक
काठमाण्डौं – गायक शरद समिप र नायिका शिल्पा पोखरेल अभिनित ‘तिमी सुनसँग जोखिने मान्छे’ गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतका रचनाकार प्रकाश केसी हुन् । भने संगीतकार ज्योति प्रकाश हुन् । उक्त गीतको संगीत संयोजन विष्णु अधिकारीले गरेका छन् । त्यस्तै भिडियोमा वरिष्ठ कलाकार मोहन निरौला, नायिका शिल्पा पोखरेल, गायक शदर समिप, माधव खरेल
काठमाडौं-गत वर्षको तीजमा ‘यतै घमाइलो उतै घमाइलो‘’सन्देश मुलक तीज गीत लिएर आएकी सञ्चारकर्मी गीता अधिकारी यसपाली ‘तीजैमा ब्रत बसी‘’ भन्दै आएकी छन् । मिलापको प्रस्तुतिमा गीता अधिकारीको शब्द रहेको गीतको भिडियो ‘तीजैमा ब्रत बसी‘’ आज राजधानीको पुरानो बानेश्वर स्थित मनसुन क्याफेमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । नायिका तथा गायिका सारिका घिमिरेको स्वरमा र नायिका
काठमाडौं – निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच डिभोर्सको चर्चा चलिरहेको समयमा यी दुबै विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी परेको छ । निर्माता छविराज ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले शिल्पा र छवि दुबैलाई वहुविवाहको उजुरी दिएकी हुन् । हेमाले शिल्पा र छविलाई विपक्षी बनाएको बहुविवाहको जाहेरी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा बुझाएकी छन् । ‘शिल्पा पोखरेलसँग सम्बन्धको
साम्राज्ञीको विकिनी फोटो किन बन्यो भाइरल ?
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला इन्डोनेशियामा छिन् । इन्डोनेशियाको बालीमा उनी आराम गर्न पुगेकी हुन् । २ चलचित्रमा लगातार काम गर्दा थकित महशुश गरेको भन्दै उनले आराम चाहेको बताएकी थिइन् । तर, साम्राज्ञी एक्लै बाली पुगेकी भने होइनन् । उनी, आफ्ना प्रेमीसँग बाली पुगेकी हुन् । तर, यतिबेला साम्राज्ञीको केही तस्वीरले सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना
४५ बर्षको उमेरमा पनि मलाइका कसरी फिट र ?
‘मुन्नी बदनाम हुई’, ‘चलो छैया छैया’ जस्ता गीतमा नाच्ने मलाइका अरोरा कति बर्षकी भइन् होला ? उनको जिउडाल हेरेर उमेर ठम्याउन मुस्किल पर्छ । मलाइकालाई झट्ट हेर्दा लाग्दैन कि, उनी ४५ बर्षकी भइन् । यस्तो पनि लाग्दैन कि, उनी हुर्किसकेका छोराका आमा पनि हुन् । मलाईकासँग पूर्वपतितर्फका एक छोरा छन् । यतिबेला मलाईकाको वैंश पनि
बलिउडका नयाँ पुस्ता वर्ष २०१९ मा डेब्यू गर्दै
बलिउडमा अब नयाँ पुस्ताले कब्जा जमाउँदैछ । उनीहरुको आगमनले बलिउडलाई कस्तो गति र दिशा दिनेछ रु नतिजा कुर्नपर्नेछ । अहिले श्रीदेवी पुत्री जान्ह्वी कपूरदेखि सैफ अली खान पुत्री सारा अली खानसम्मले बलिउडमा पाइला टेकिसकेकी छिन् । उनीहरुले सुरुवाती छनक निकै राम्रो देखाएका छन् । उनीहरुकै पदचाप पच्छ्याउँदै अरु पनि स्टार किड्स बलिउड प्रवेश गर्ने क्रम